कसरी रोकिएको थियो स्पेनिस फ्लू ? – जुगल टाईम्स
Posted on २ जेष्ठ २०७७, शुक्रबार १०:११ Author जुगल टाईम्स	Comment(0)
अहिले चलिरहेको कोरोना भाइरसले विश्वलाई आक्रान्त छ । झण्डै ३ लाख मानिसको ज्यान लिइसकेको छ । तर कोरोना भाइरसभन्दा कैयन गुणा भयानक महामारीहरूले करोडौं मानिसको ज्यान लिएको विश्व इतिहास छ । सन् १९१८ मा फैलिएको स्पेनिस फ्लूको महामारी सबैभन्दा खतरनाक महामारीमध्ये एक हो । स्पेनिस फ्लुले विश्वमा कम्तीमा ५ करोड मानिसको ज्यान लिएको थियो ।
अहिले कोरोना भाइरसबाट ज्यान गुमाउनेहरूमा अधिकांश वृद्धवृद्धा तथा रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कम भएका, अन्य रोगहरूबाट ग्रसित भएका मानिसहरू धेरै छन् । तर स्पेनिस फ्लूबाट ज्यान गुमाउनेमा २० देखि ३० वर्षसम्मका स्वस्थ युवायुवतीहरू धेरै थिए ।
स्पेनिस फ्लूको महामारी सकिएको १ सय वर्षपछि आएको कोरोना भाइरस महामारीसँग जुध्नका लागि विश्वका कैयन देशहरूले स्पेनिस फ्लूका सन्दर्भ सामग्रीहरूलाई उपयोग गरिरहेका छन् । बेलायतको सार्वजनिक स्वास्थ्यसम्बन्धी निकाय पब्लिक हेल्थ इंगल्याण्डले कोरोना भाइसविरुद्धको लडाइँमा एक आपतकालीन योजना तयार गर्नका लागि स्पेनिस फ्लूको संक्रमणको फैलावट सम्बन्धमा अध्ययन गरेको थियो ।
अध्ययनबाट एउटा गम्भीर तथ्य के खुलासा भयो भने सन् १९१८ को जाडो याममा स्पेनिस फ्लूको दोस्रो लहर आएको थियो, जुन निकै घातक सावित भयो ।
तत्कालीन समयमा दुनियाँ प्रथम विश्वयुद्धमा होमिएको थियो । स्पेनिस फ्लूको संक्रमण रोकथाम तथा उपचार र सावधानी अपनाउनेलगायतमा सरकारहरूको पर्याप्त ध्यान जान सकेन । भीडभाडयुक्त सैनिक परिवहन, युद्ध सामग्रीको ओसापसार तथा जंगी सामान बनाउने कारखाना, बस तथा रेलहरूका माध्यमबाट स्पेनिस फ्लू विश्वभर नै डढेलोसरी फैलिएको थियो ।
सन् १९१८ मा इन्फ्लुएन्जाको कुनै उपचार थिएन । साथै निमोनियालगायतका स्वासप्रस्वासजन्य रोगको उपचारका लागि समेत कुनै एन्टिबायोटिक्स उपलब्ध थिएन । त्यस्तोमा अस्पतालमा बिरामीको भीड लाग्यो । त्यस समय संक्रमण रोक्नका लागि देशहरूमा अहिलेसम्म लकडाउन अपनाउन पनि सम्भव भएन । यद्यपि, धेरै व्यापार व्यवसायहरू तथा खेल प्रतियोगिता समेत युद्धका कारण बन्द भएका थिए ।
सडकमा डिसइन्फेक्टेन्ट छर्किने तथा मास्क लगाउने चलन पनि त्यतिबेला देखि चलेको थियो । यद्यपि, मानिसहरूमा स्वास्थ्यसम्बन्धी जानकारीहरू पर्याप्त थिएनन् । अहिले कोरोना भाइरस महामारीका बेला चल्ने विभिन्न अफवाहहरूजस्तै त्यस बेला पनि अनेकखालका अफवाह फैलिए । नियमित चुरोट खाने गर्नाले स्पेनिस फ्लू नलाग्ने हल्ला चलाइयो । बेलायतको संसदमा त एकजना सांसदले नै सोधे : के दिनको तीनपटक कोक लिनाले इन्फ्लुएन्जाबाट बँच्न सकिन्छ भन्ने कुरा सही हो ?
स्पेनिस फ्लूको महामारीबाट सायदै कुनै देश अछुतो रहे । तर महामारीको असर तथा महामारीविरुद्ध चालिएका कदमका सन्दर्भमा भने देशहरूबीच ठूलो अन्तर रह्यो । अमेरिकाका कतिपय राज्यहरूले नागरिकहरूलाई क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गरे । कतिपय राज्यले मुखमा मास्क लगाउन अनिवार्य गरे । सिनेमा, रंगमञ्च तथा मनोरञ्जन स्थलहरू पूर्ण रूपमा बन्द गरियो, अमेरिकाभर ।
अन्ततः सन् १९१९ को गृष्मयाममा स्पेनिस फ्लू आफैं नियन्त्रणमा आयो । कुनै खोप वा औषधिको आविष्कार भएर स्पेनिस फ्लू निर्मूल भएको होइन । संक्रमितहरू कि त मरे, कि त रोग प्रतिरोधी क्षमताको विकास गरे । इन्फ्लुएन्जाको खोप त पहिलोपटक सन् १९४० को दशकमा मात्रै पत्ता लागेको हो ।
‘चीनले कोरोनाबाट विश्वलाई जोगाउन सक्थ्यो, तर जोगाएन’
Posted on १६ बैशाख २०७७, मंगलवार ०९:४५ Author जुगल टाईम्स
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले कोरोना भाइरस संक्रमणलाई लिएर चीनमाथि कडा टिप्पणी गरेका छन्। ह्वाइट हाउसमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा ट्रम्पले चीनतर्फ इंगित गर्दै बेइजिङ चाहेको भए अमेरिकामात्र नभई विश्वलाई नै जोगाउन सक्ने अवस्था रहेको, तर यसो नगरिएको बताएका हुन्। कोरोना भाइरस’bout चीनको कदममाथि अमेरिकाले निकै गम्भीर अनुसन्धान गरिरहेको ट्रम्पले दावी गरेका छन्। ‘हामी चीनसँग खुशी छैनौं, […]
Posted on १९ बैशाख २०७७, शुक्रबार १०:०६ Author जुगल टाईम्स
ज्वरो देखिएको भन्दै विराटनगरका एकसेएक निजी अस्पतालले भर्ना लिन नमानेर फनफनी घुमाएका एक विरामीको धरानमा उपचारका क्रममा निधन भएको छ । देवानगञ्ज-१, सुनसरीका ३५ वर्षीय रवीन्द्र यादवको मृगौला र लिभरमा समस्या देखिएपछि कोशी अस्पतालले भेन्टिलेटर भएको अस्पतालमा लैजान रिफर गरेको थियो । विरामीका परिवारले बुधबार राति र बिहीबार विहानभर विराटनगरका एकपछि अर्को निजी अस्पतालमा पुर्‍याएका […]